काठमाडौं उपत्यकाकाे शौचालयहरूमा छिर्नै सकिन्न ! « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं उपत्यकाकाे शौचालयहरूमा छिर्नै सकिन्न !
काठमाडौं । १० लाख मानिस बस्ने काठमाडौं महानगरपालिका भित्र जम्मा ४५ वटा मात्रै शौचालय छन्, त्यो पनि अधिकांश छिर्न नसकिने अवस्थामा छन् । अहिले काठमाडौमा कतै बाहिर हिँड्दा शौचालय जानुप-यो भने कि रेष्टुरेण्टहरुमा, कि मलहरुमा छिर्नुपर्छ ।
महानगरमा भएका सार्वजनिक शौचालय ज्यादै फोहोर छन् । काठमाडौं महानगरले शौचालय व्यवस्थापनका लागि विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई लिजमा दिएको छ । लिजमा दिँदा शौचालय सफा राख्नुपर्ने लगाएतका व्यवस्था भएपनि पालना भएको हुँदैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले लिजमा दिइएका चार वटा शौचालयहरुबाट मात्रै बार्षिक ९० लाख रुपैयाँ कमाई हुन्छ । स्मार्ट महानगर, समृद्ध महानगरको सपनालाई काठमाडौं दौनिक शौचले छटपटीदै हिँड्ने सर्वसाधारणको पीडाले जिस्काइरहेको छ ।